Abafundi nohlelo lokusiza izikole | News24
Abafundi nohlelo lokusiza izikole
ISITHOMBE: sithunyelweKungesikhathi kuzonikelelwa ngokusemthethweni ngendlu kanogada esikoleni samabanga aphezulu iSiyanda, eSweetwaters.
ABAFUNDI basenyuvesi i-Durban University of Technology esikhungweni esise-Riverside sebesungule uhlelo lokulekelela izikole.
Laba bafundi benza unyaka wabo wesibili ezifundweni ze-Public Relations. Amagama abo ngoNontuthuzelo Mzizi, Nompilo Mngadi, Minenhle Xulu, Hope Ntanzi kanye noSphumelele Mncube.
Laba bafundi basanda kulekelela isikole samabanga aphezuku iSiyanda endaweni yaseSweetwtars ngokuthi sakhe indlu kanogada.
Ngokusho kukaNksz Mzizi uthe lolu hlelo lwabo luqale njengomsebenzi wesikole kodwa ngenxa yokubona izinkinga ezibhekene nezikole seku wuhlelo abahlose ukuqhubeka nalo.
“Bekuthiwa asizibandakanye nezikole ezisemphakathini sithole ukuthi kungabe yiziphi izinkinga ezibhekene nazo bese sibhala ngazo. Uzakwethu uNompilo ube esesitshela ngesikole iSiyanda nokuyisikole lapho kade efunda khona.
“Sithole ukuthi lesi sikole sinenkinga enkulu yokugqekezelwa kanye nezingane ezingena nezinto ezinga-lungile emagcekeni esikole ezifana nezidakamizwa kanye nezikhali. Sibe sesinquma ukuthi ngoba naku sesiyabubona ubunzima obubhekene nalesi sikole, kunokuba sibhale bese sibashiya kanjalo, kungani kungabi khona into esibenzela yona ezobasiza ngisho sesingasekho thina. Liqale lapho ke isu lokuthi sibatholele indlu kanogada,” kubeka yena.
Uqhube wathi banethemba lokuthi loku kuzosiza kakhulu kuthi uma bemthola umuntu ozogada isikole angabi nenkinga yokuthi uzohlalaphi.
“Into esiyitholile ukuthi isikole asinaye umuntu ogada isikole kanye nabafundi ubusuku nemini. Ukuba nendlu kanogada kuzokwenza kube lula ukuthi kube khona umuntu onjalo ngoba uzobe azi ukuthi vele unayo indawo yokuhlala.”
Uthe abazukugcina ngalesi sikole kodwa isifiso sabo ukuthi badlulele nakwezinye izikole bazisize uma ngabe bethola uxhaso kosomabhizinisi.